file sharing Lugood lagu daray Lugood la sii daayo Lugood 9.1. Haddii aad isticmaalayso Lugood 9.1 ama ka dib, si aad u computer aad wareejin karaan faylasha, u abuuray by app ah oo ku saabsan iDevice, ka iDevice. Ka soo qaad in aad ku abuureen file ah oo la Pages on your iPad. Waxaad nuqul ka kartaa file ka aad iPad si aad u computer. Later, waxaad isticmaali kartaa Pages u Mac OS X in la furo file this on your PC.
Qaybta 1. Sida loo Helo Sharing File on Lugood Qaybta 2. Waa maxay Apps isticmaali kartaa Lugood File SharingApps Qaybta 3. Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ku saabsan Lugood Sharing File Qaybta 4. Sida loo Isticmaalo File Sharing in Lugood Qaybta 5. Sida loo Helo ah Lugood File wadaago Folder ka dib markii Sharing Qaybta 6. 5 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay Lugood File Sharing
Qaybta 1. Sida loo Helo Sharing File on Lugood
Kaliya marka iDevice ku xiran computer, waxa aad heli kartaa file wadaago feature on Lugood. Riix si aad iDevice hoos AALADAHA > Apps . Hoos u furmo suuqa iyo waxaad ka heli doontaa feature file sharing ah.
Qaybta 2. Waa maxay Apps isticmaali kartaa Lugood File Sharing
Chine oo dhan ma ah in file sharing taageero iDevice. Waxaad ku hubin kartaa ku xira iDevice la computer iyo ordi Lugood. Riix si aad iDevice hoos AALADAHA iyo guji App tab ee guddiga xaq. In qaybta Sharing file ah Lugood ah waxaad ka heli doontaa liiska Chine in ay taageeraan file sharing. App kasta oo aan in liiskan ma taageeri file sharing.
Qaybta 3. Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ku saabsan Lugood File Sharing
Faa'iidooyinka Lugood File Sharing:
Qaybsiga File in Lugood la shaqeeya USB. Just furaysto iyo ciyaaro.
No syncing la iDevice loo baahan yahay.
No tayada khasaaro.
Wadaagista faylasha la file sharing Lugood waa wax fudud oo fudud.
Waxaa xannaanayn doonaa si ay metadata oo dhan.
No xadka tirada ee files wareejiyay ama la baaxadda faylasha.
In loo sahlo in ay sameeyaan file sharing Lugood on iPhone, iPad iyo iPod taabto.
Waxaad wadaagi kartaa file ka PC in iDevice iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Qasaaraha Lugood File Sharing
Ma app kasta oo ku Lugood taageero iDevice File feature Sharing.
Xitaa ma dhan Lugood taageero iDevice File feature Sharing. Sida tusaale ahaan, iDevice la version ka hor macruufka 4 ma taageeri Lugood File feature Sharing.
Qaybta 4. Sida loo Isticmaalo Lugood File Sharing si ay u gudbiyaan File
Qaybtaan waxaan ku baran doonaa sida loo ka iDevice wareejiyo file in computer iyo computer si iDevice isticmaalaya file sharing Lugood. Si aad u buuxiso qaybtan waxaad u baahan tahay waxyaalaha soo socda:
Version ugu dambaysay ee Lugood. Waa lacag la'aan ah. Waxaad ka website Apple ee kala soo bixi kartaa.
Mac OS X v10.5.8 ama Later ama haddii aad tahay user Windows ah waxaad u baahan tahay Windows XP, Windows Vista, Windows 7 ama Windows 8.
Device macruufka ah la version macruufka 4 ama ka dib.
An macruufka App taageera File Sharing.
1. Transfer Faylal ay ka iDevice in Computer
Talaabada 1: Download iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee Lugood haddii aadan hore u samaysay.
Talaabada 2: Isku aad iDevice la your computer iyadoo la isticmaalayo isku xira dekedda ee la socota iDevice in cable USB ah.
Talaabada 3: Burcad Lugood haddii aan la horey u ordaya on your computer. Waxaa laga yaabaa inaad fiiri sawirka ah sida hoos ku qoran:
Talaabada 4: Dooro iDevice ka AALADAHA qaybta bidix ee Lugood ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan heli karin galeeysid tagay, View doorashada bar ah menu Lugood iyo guji Show galeeysid ah.
Talaabada 5: Riix Apps tab iyo hoos u dhaqaaq hoose ee bogga meesha aad ka heli doontaa qaybta ah ku tilmaamay sidii File Sharing. Eeg shaashada ku qoran:
Fiiro gaar ah: Haddii aadan arag qeybta kasta oo ku tilmaamay sida File markaas Sharing mid ka mid ahaa app ku saabsan iDevice file sharing taageero.
Talaabada 6: Halkan, waxaad ka heli doontaa liiska codsiga aad iDevice taageera feature File Sharing of Lugood ah. Dooro mid ka mid ah barnaamijyadooda dhinaca bidix si aad u aragto files la xiriira app in liiska dokumentiyada la dhinacaaga midig.
Tallaabo 7: Dooro file ah oo ka mid ah liiska dokumentiga. Waxaad ku wareejin kartaa file in sidoo kale ay soo jiiday, oo tagtey ama adigoo gujinaya ee Save si ... button.
Tallaabo 8: Si aad u jiidi oo dhibic, waxaad dooran kartaa in files iyo jiidi file in si folder ama daaqad on your computer jeedi in ay in.
Tallaabo 9: Si aad u isticmaasho habka labaad, riix Save si ... button oo la helo in folder aad computer halka aad rabto in lagu badbaadiyo file in. Markaas riix Dooro button si loo badbaadiyo file in.
2. Transfer Faylal ay ka Computer si ay iDevice via file sharing Lugood
Talaabada 2: Isku aad iDevice la your computer la cable USB ah.
Talaabada 3: Orod Lugood. Waxaad arki doonaa shaashadda hoose:
Talaabada 4: Guji si aad iDevice ka AALADAHA qaybta baar ku leftside ee Lugood ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aadan heli karin galeeysid ka tegey, guji View ka bar ah menu Lugood iyo guji Show galeeysid .
Talaabada 5: Riix Apps tab iyo hoos u dhaqaaq hoose ee bogga halka aad ka heli doonaa File qaybta Sharing. Eeg shaashada ku qoran:
Fiiro gaar ah: Haddii ay jirto qaybta jirin ku tilmaamay sida File Sharing, waxay ka dhigan tahay mid ka mid ahaa app ku saabsan iDevice samayn kartaa file sharing.
Talaabada 6: Halkan, waxaad ka heli doontaa liiska app aad iDevice taageera feature File Sharing of Lugood ah. Dooro app dhanka bidix si aad u aragto files la xiriira app in liiska dokumentiyada la dhinacaaga midig.
Tallaabo 7: Waxaad si iDevice wareejin karaan faylasha ka computer sidoo kale ay soo jiiday iyo tagtey ama adigoo gujinaya ku Add button.
Tallaabo 8: Si aad u jiidi oo hoos u, dooro in files on your computer iyo jiidi file in qaybta liiska Document of Lugood iyo hoos u file in ay jirto.
Tallaabo 9: Si aad u isticmaasho habka labaad, guji kaliya ku Add button oo ay helaan faylka on your computer. Markaas riix Open button ku darto file in aad iDevice.
Qaybta 5. Sida loo Helo File Lugood ee la wadaago Folder?
Just isticmaali Lugood file sharing feature, laakiin hadda ma ogid meeshay ka si aad u hesho faylasha la wadaago? Ha welwelin. Waxaad raaci kartaa talooyin hoose.
Marka aad files ka computer wareejiyo si aad iDevice:
1. Helitaanka file sharing qaybta Lugood ee Lugood si aad u ogaato faylasha aad rabto in aad ka yar tahay waxa app.
2. Markaas, aad iDevice, oo ilmaa ka heli app la mid ah. Waxaad ka heli doontaa faylasha la wadaago waa xaq waxaa.
Marka aad files ka iDevice wareejiyo computer:
Waxaad dooran kartaa wax badbaadiyo waddada si loo badbaadiyo faylasha la wadaago. Haddii aad tahay qof cabsan oo laga yaabo in aad illowdo Jidka badbaadiyo, kaliya iyaga ku badbaadin karto in desktop.
Qaybta 6. 5 Su'aalaha Inta badan-weydiiyay Lugood File Sharing
Q1. Ka dib markii gujinaya 5 jeer ama in ka badan oo ku saabsan mid ka mid ah barnaamijyadooda mararka qaar ma files kale ka soo muuqan qaybta Document ah?
Apple oo aan weli go'an dhibaatadan. Ilaa hadda, xalka uu yahay kaliya in ay bilaabi Lugood.
Q2. Waxaad arki kartaa oo kaliya files la xiriira app ah hal mar oo keliya. Caddeyn dheeraad ah, u malaynayaa, in aad ku xidhan aad iDevice la Lugood iyo xulay barnaamijyadooda ah, dhihi Stanza, oo wuxuu arkay files la xiriira Stanza qaybta Document ah. Si kastaba ha ahaatee, marka la hubiyo file app kale marka aad ku soo laaban doonaa Stanza aadan ka heli karo files ee qaybta Document ah?
Q3. Mararka qaarkood aad la kulmi karto dhibaato arrimaha video haddii aad isticmaalayso daaqadaha?
Isku day inaad si ay kor DirectX.
Q4. Software antivirus lagu rakibay on your computer laga yaabaa in ay abuuraan dhibaato kala wareejinta file.
Update ama Disable ama ka saar software antivirus ka your computer.
Q5. Waxaa laga yaabaa in badan oo dhibaato la xidhiidha iPod ama iPhone inta aad isku dayaya kuwaas iDevices u file sharing?
Isku day in aad dib ama reboot aad iPod ama iPhone. Mararka qaarkood, xariirta firmware u xalliyo dhibaatada.
Top 10 Lugood lagu bedelan karo
Ka iPhone Bedelka Music inay Lugood
Bedelka Lugood playlist si iPhone la Loss No
Lugood Transfer iibsaday iPhone
Waa maxay iPhone celinta iyo Sida loo Soo Celinta iPhone ka Lugood iyo iCloud kaabta
> Resource > Lugood > Wax walba oo aad ka ogaato ku saabsan Lugood File Sharing